AMBODIMANGA SAHASOA MANANARA-AVARATRA : Mangetaheta fampandrosoana ny mponina
Anisany fokontany iray tsy tara eo amin’ny fampandrosoana ny ao Ambodimanga Sahasoa, kaominina Antanambra distrikan’i Mananara Avaratra. 16 mai 2019
Azo lazaina fa mitana ny laharana voalohany ao amin’ny kaominina Antanambe ny fokontany Ambodimanga raha ny lafiny ara-toekarena. Betsaka ireo vokatra miakatra raha tsy hilaza afa-tsy ny jirofo, lavanila ary ny kafe.
Manao ny aina tsy ho zavatra ny vahoaka amin’ny fanamboaran-dalana mampitohy an’Ambodimanga amin’ny Antsapanana Rn5. Isaky ny talata no miara-mientana ny vatan-dehilahy 18 taona miakatra rehetra. Ny tetezana no mbola mipetraka ho olana goavana ankehitriny, tetezana eo amin’ny fidirana ny tanàna mihitsy no simba. Manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana sy ireo mpandraharaha ara-toekarena ny filohan’ny fokontany ao Ambodimanga, mba hanampiana azy ireo amin’izao fanamboarana ilay tetezana mba ho afaka halehan’ny fiarakodia.
Efa nisy fotoana anefa nahafahan’ireo fiara niditra tany an-toerana. Amin’izao fotoana izao, misy fahasimbana goavana noho ny rivodoza nifanesy nandalo ka nahatonga ny fahasimban’ireo tetezana roa miditra ao an-toerana. Marihina fa vokatry ny herimpon’ny vahoaka ao Ambodimanga niampy latsakemboka no mba nahavitana azy vonjimaika mba afaka hiampitan’ny moto aloha. Mangetaheta fampandrosoana ny mponina any an-toerana ka miantso vonjy mba hamitana fotodrafitrasa.